Chinese Embassy in Myanmarမှတဆင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သို့ မြန်မာပြည်သူများကိုယ်စား Gen Z Burma မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Chinese Embassy in Myanmarမှတဆင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ မြန်မာပြည်သူများကိုယ်စား Gen Z Burma မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မြန်မာပြည်သူလူထုကိုယ်စား ဤစာကို ရေးလိုက်ရပါသည်။ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ အစည်းအဝေးပွဲကြေညာချက်၌ စစ်အာဏာရှင် မင်းအောင်လှိုင်အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါသည်။
မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်၏ခေါင်းဆောင် လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ မင်းအောင်လှိုင်သည် အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် စင်စစ်သာ ဖြစ်သည့်အပြင် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအပေါ် မရေမတွက်နိုင်သော ရာဇဝတ်မှုများစွာကို ကျူးလွန်ထားသည့် လူသတ်သမားဖြစ်သည်ကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သိရှိသဘောပေါက်ရမည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်သည်တိုင်းပြည်၏အာဏာကို မတရားသိမ်းယူခဲ့ကာ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် အရပ်သား ၉၀၀ နီးပါးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး အရပ်သား ၆၀၀၀ နီးပါးကို အဓမ္မဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ တရုတ်အနေဖြင့်
စစ်တပ်၏ မတရားမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကန့်ကွက်ရမည့်အစား အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သိသိသာသာ သတိပြုခံစားမိကြသည်။ တရုတ်သည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေနှင့် သြဇာအာဏာရှိပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကို သံတမန်ရေးအရ ကာကွယ်ပေးနေပြီး မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တရုတ်အစိုးရအကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားသည်။ တရုတ်သည် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွှယ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရရှိမည့်
၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွါးကိုသာ အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သတ်ဖြတ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ် လျစ်လျူရှုထားပြီး မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပါလီမန်အမတ်များက ဖွဲ့စည်းထားသည့် တစ်ခုတည်းသော NUG အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်မှာ
တရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးထက် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဂရုစိုက်လျက်ရှိသည်ကို သိသာထင်ရှားစွာသိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ တရားမဝင် အဓမ္မ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သမ္မတကြီး၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းခြင်း မရှိဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်သားခေါင်းဆောင်များနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို အရင်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရမည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများတွင် တရုတ်သည် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ သဘောဆန္ဒနှင့်
ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရပ်တည်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ၎င်းတို့၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလုပ်ရပ်များကို ကာကွယ်ပေးနေသည့်ပုံ ပေါ်နေသည်။ အကယ်၍ တရုတ်သည်မြန်မာပြည်သူလူထု၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အတူ မရပ်တည်နိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာပြည်တွင်းရေးဖြစ်ကြောင်း တရုတ်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း တရုတ်အနေဖြင့် မြန်မာ့အရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိပါ။ စစ်အုပ်စုကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန် မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို တရုတ်အနေဖြင့် ပြုလုပ်နေပါက
နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြည်သူလူထု၏ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်စေလိုပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ အသံကို နားထောင်ရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်သော ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန်အတွက် မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီပေးနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံကို တောင်းဆိုပါသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအကျိုးကျေးဇူးများသည် လက်ရှိအခြေအနေထက် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် များစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒနှင့်အညီ NUG အစိုးရနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် တရုတ်အစိုးရကို လေးစားစွာဖြင့် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
We are writing this letter on behalf of the people of Myanmar.
We strongly condemn that Chinese government mentioned the military junta Min Aung Hlaing asaleader of Myanmar in the statement of their meeting. China must take notes that Min Aung Hlaing doesn’t represent the people of Myanmar and he is not the leader of our country but is the true terrorist leader and murderer who has been committing countless crimes to innocent civilians.
It has been clearly known that since the 1st of February 2021, the coup leader Min Aung Hlaing unjustly seized all powers of the state and the junta has murdered nearly 900 civilians, abducted nearly 6000 civilians. We strongly felt that China is trying to legitimize the military coup leader instead of rejecting the acts of injustice and violations of human rights by the Myanmar military juntas. China asamember of UN security council has an influential power since it has always been providing diplomatic shield for Myanmar and China enjoys good relations with military juntas.
China has always been focused the business interests in Myanmar which are affiliated with Myanmar military. Clearly, China cares its economic interests rather than democracy and human rights of Myanmar as we have witnessed that China is neglecting brutal massacring and human rights violations by the Myanmar military and China fails to engage with NUG government which is the sole government formed by the members of Parliament elected by the will of Myanmar people.
China must realize that the dialogue process could not continue without urging to immediate release of illegally and unjustly detained government officials including our president, state counselor and innocent civilians. If they really want to make dialogue, they must release our civilian leaders and all the detainees first. In current political situations, China has not clearly sided with the will of Myanmar people and it rather sounds to protect Myanmar military and their brutal actions. If China could not stand with the voice of Myanmar people, China has no right to interfere as China clearly said that Myanmar’s current situation is internal affairs.
We would like China to realize that any attempts to legitimize the military regime would risk undermining people to people relations between the two countries. We request China to listen to the voices of majority of Myanmar people and help our people to get back to the path to democracy which is our wish. In turn, the benefits of stability from having democratic country in Myanmar, would bring far greater benefits to China than current situation.
Therefore, with all due respect and sincerity, we urge Chinese government to engage with NUG government to support peace in Myanmar by siding with the will of Myanmar people.
Gen Z Burma
စစ်အာဏှာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရာ တွင် သက်စွန့်ဆံဖျား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေ တဲ့ ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဇွန်အရေးအခင်းဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ချီးမြှင့်